Daawud Ibsaa - Wikipedia
Daawud Ibsaa Ayyaanaa Cunqursa mirga Oromoo fi dura bu'a Adda Bilisummaa Oromoo ti.
Seenaasaa Ijoolummaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Daawud kan dhalate naannoo Horroo Guduruu ganda Abuunaa jedhamu keessatti yoo ta'u kunis kutaa bulchiinsa Wallaggaa durii kessatti argama. Barnoota isaa kutaa tokko hanga saddeetii Mana Barumsaa Shaambutti barate. Barnootaa sadarkaa lammaffaa ammoo carraa iskoolaarshiippii argatee Mana Barumsa Jeneraal Wiingeeti keessatti barachuun bara 1970tti xumure. Bara barnootaa 1970/71 yuunivarsiitii yeroo ammaa Yuunivarsiitii Finfinnee jedhamu (yeroo sana Yuunivarsiitii Hayilasillaasee Tokkoffaa jedhama ture) seene barnoota sadarkaa olaanaa jalqabae. Haa ta'uu malee warraaqsa barattoota fi uummataa yeroo sana biyyattii keessa tureen, barnoonni seeran adeemsifamaa hin ture. Boodarra bara 1974ttis mootummaan Hayilasillaasee kufee Dargiin aangoo qabate.
Bara 1975 fi 76 keessaa ABO harka lafa jalaatin sochii guddaa gochaa ture. Daawud ammoo dhaaba kana jalatti Goblaa Dargaggoota (Youth Wind) jedhamu jalatti miseensa ture. Sochii kana keessattis hirmaachaa waan tureef motummaan Dargii qabee mana hidhaatti isa galche. Daawud kan hidhame tilmaaman Sadaasa 1977 yoo ta'u kan hiikkame ammoo Mudde 1979 ti.
Erga mana hidhaatii ba'ee booda bara 1980 barnoota itti fufuuf gara yuunvarsiitiitti deebi'e. Garuu, yeroo sanatti mootummaan Dargii ilmaan Oromoo mana hidhaatti naqaa fi hiraarsaa waan tureef, ajaja ABOtin barnoota dhiise gara dirree waraana deemee ABOtti dabalame. Daawud barnoota istaatistiksii kan barachaa ture yoo ta'u waggaa sadi'i baratee waggaa afraffarratti barnoota dhaabe dirree qabsootti makame.
ABO Keessatti[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Qajeelfama ABOn kenneefin, Daawud barnoota dhiisee Suudan deemudhaan bara 1980 ABOtti makame. Itti aansee leenjii waraanaa fudhachuuf gara Eertiraa deemudhaan qabsoof of qopheessuuf leenji'e. Leenjii kana bara 1981 xumuruun gara Sudaanitti deebi'ee karaa Oromiyaa dhihaa qabsoo waraanaa jaqabe.
Ebla 1981tti, Gidaamii bakka Giraayi jedhamutti, Daawudi fi sagliin inni wajjin hojjachaa ture summii nyaatatti naqame nyaachudhaan namni torba yoo du'u Daawud gaggabee of wallaalee kufe. Warra summii sana nyaatan saddeettan keessa torba yoo du'an Daawud qofatu lubbuun hafe. Kanuma keessaan Daawud mootummaa Dargiitin qabamee gara mana hidhaatti geeffame hidhame.
Summii kana kan qopheesse bakka bu'aa Dargii kan naannoo Wallaggaa kan ture namicha Nugusee Faantaa jedhamuu yoo ta'u raawwi isaatif ammoo namoonni konyaa, aanaa, fi gandarraa jiran irratti hirmaataniiru. Summii kan nyaatatti godhee kan Daawudii fi garee isaatif kenne namicha Zakkaariyaas Shorroo jedhamu yoo ta'u warra summii nyaatan keessa tokkoo obboleessasaa Taaddasaa Shorroo ti. Taaddasaa Shorroo ABO keessatti socho'aa kan ture yoo ta'u summii kanaan du'e.
Mootummaan Dargii Daawud kan gaggabee of wallaalee jiru kana qabee jalqaba gara Naqamteetti geessun torban lamaaf warra tikaa bira turse. Boodarra Naqamtee hoofun gara mana hidhaa Maayikalaawwiitti geeffame. Maayikalaawwiitti qorannoo gochuuf kan socho'an yoo ta'u Daawud baayye dhukkubsachaa waan tureef itti fufuu hin dandeenye. Sababa kanaaf hospitaala poolisiitti geeffamuun achi ji'a ji'a tokkoo hanga ji'a lamaa ture. Hoospitaalaa erga ba'ee booda, masaraa guddichatti geessuun qormaata itti fufanii, kunis toorcherii (torture) of keessaa qaba ture.
Qorannoo kana booda, Daawud Hagayya 1982 gara mana hidhaatti geeffame. Akkaatadhuma kanaan hanga bara 1986tti mana hidhaa kan ture yoo ta'u bara Mudde 1986 hiriyootasaa nama sada'i, Aman Nuuraa (Hundee Nuuraa), Nagaash Kumsaa (1983tti Beegitti waraanarratti kan wareegame) wajjin mana hidhaati baduun deebi'anii gara dirree waranaa deebi'uun ABOtti makaman.
OMN: Gaafifi Deebi Ob. Daawud Ibsaa , Adoolessa 14,2014, Fulbaana 23, 2014 kan ilaallame
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Daawud_Ibsaa&oldid=31023" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 24 Muddee 2018, sa'aa 13:36 irratti.